waxaa maamula 20-01-09
Sida wabiga wabiga, raacitaanka doomaha waxay raacaan balanqaadka guud ee baaskiil wadista iyo fudeyd sahlan, oo u oggolaanaya inay si dhakhso leh u daboolaan masaafada dhaadheer - gaar ahaan haddii aad leedahay baaskiil e-baaskiil. Si ka duwan wabiyaasha quruxdooda badanaa waxay ku jiraan farshaxanimada dushooda iyo xariifnimada iyo ...
Toddobaadka eBike ee Wareegga wararka eBike: ● eCargo Baskiyo Halkii Gawaarida NYC ● Lyft's Citi eBikes Ku soo noqon NYC? Int Gawaarida Gawaarida ee loo yaqaan 'The Power Inspired Vingage Electric Shelby' C eCargo oo ka socota Repower & Schaeffler ● eBikepacking Scotland Video ● Suuragalnimada Kacaanka eCargo ee Yurub ● eBike Char ...
Sannad-sannadeedka 5-aad ee Dadka Loogu talagalay Baaskiilada E-Bike wuxuu ahaa guul weyn iyadoo kaqeybgalka ugu weyni uu weli yahay. 2019 waxay ahayd sanad mashquul ah dhinacyo badan oo ka mid ah baaskiiladaha korontada ku shaqeeya sidaa darteed waxaa jiray waxyaabo badan oo dabooli kara dhacdadan 1 maalin. Sannadkan shirweynaha waxaa lagu qabtay xarunta Canyon Bicycle USA ee ku taal ...